BUUR-KACAAN ( Sheeko xiiso badan!)
Monday 2nd March 2020 08:38:26 in Aragtida Dadweynaha by Madaxa Wararka
Muuq xumaa magaaladu?! Jiingaddaas baa se ugu arag xun. Waa Jiingad xun oo daxalaysatay. Xun oo heedhe waa ay guuldarraystay. Si bay u dandarraysan tahay. Dusheeda waxaa saaran aqbo. Geed hindi wayn ayaa janjalka ku haya. Barina geed Yuhuud baa ka saaran. Daydka waxa uu ka samaysan yahay cooshado, caagag, gasacyo iyo jiingado mirir ah oo laysku kabkabay. Dabayshu waxa ay u ligligaysaa sidii laan hareeri oo gooni baxa. Waa jiingad ka kooban laba qol iyo berso. Guri laguma tilmaami karo, balse edeg magaalo ayaa lagu sheegi karaa. Dadka gabbaadsadaana waa uun iska aalo-dadeed. Waxaa ku nool reer Jiilaalsaday. Weligiisbuu jiilaalku kala tuuri jiray qoysaska, oo uu ragga u darnaa jiray. Maah maah door ah baa tiraa " Ragga iyo jiilaalku waa legdamaan waxaase laga raayaa hadda, ka ay naagtu la jirto" malaha jiingaddaan nin iyo jiilaal baa ku dagaallamaya, naagna waa ay isku daawanaysaa?
Carruur isuma talido ah ayaa ku nool. Kaaga darane odoyaal ayaa galabta u fadhiya gar muddo soo jiitamaysay, taas oo ku saabsan furrin reerka lagu kala gaynayo. Hooggi beri dhowayd dhacayay ayaana saldhig u ah kala haadka la saadaalinayo in uu reerka ku dhaco. Dirir ku naag waayo, Geyfanna ku garoob noqoto. Ka gadaal diidmo adag oo Geyfan kala hortimid baryo badan oo odoyaashu u soo jeediyeen. Waxaa Dirir ku dhawaaqay dalaaqo sina u naxdin badnayd, sina u dhib badnayd. Hal xabbo kaliya maahee saddex aan kala harin oo karaahiyo xambaarsan buu si caro leh ugu dhawaaqay, oo dhawaaq kuu roone weliba ku naadiyay. Reer muddo dhisnaa ayaa dumay. Carruur iska rafaadsanaa ayaa ku barbaarin beelay; sidaa daraaddeed, qof kasta isaga oo aan faraxsanayn ayaa uu albaabka ka baxay.
Akhriska buugaagta ayaa uu billaabay. Buug suugaameed walba oo af-soomali ku qurnaa buu dusha ka xafiday. Buugaagtii galbeedka iyo bariga ayuu u dhaadhacay. Noofal qiimo iyo xiiso leh oo uusan dalban ma jiro. Noofalkii uu qoray qoraaga reer Kolombiya ee ahaa " One hundred years of Solitude” ayaa uu maalmo ku aqriyay. Noofalkii caanka ahaa ee "Things Fall apart” ayuu ku xijiyay "Tiger’s wife” ayuu isna laqay. "Maanafaay” Adeegto, Ayaandaran iyo buugaagtii Aroomo ayuu isku daba xiray. Sannadkaas, waxa uu ahaa ninka ugu sheekada badan meel walba oo la fariisto, si taxaddar leh ayaa loo dhegaysan jiray sheekooyinkiisa. Maammulihii iskuulku waa uu jeclaaday, 150$ ayuu mushaar ahaan uga qaadan jiray iskuulka, laakiin hadda waa la dallacsiiyay oo 350$ ayuu qaataa. Gelinka danbe haddana shaqo soo dhowayn ah ka helay Hoteel Sahafi. Shaqadaas waxa ay sii bartay furfurnaan xad-dhaaf ah, gabi ahaanna waxa uu dhigay dhaqankii qallafsanaanta, waxa uuna galay jawiga maadda iyo sheekada, jawiga furfurnaanta iyo Bashaash nimada. Mushaarkii waa u beekhaamay.
FG: Buur-kacaan, waa dalcaddii ay ku gaardin jireen ciidankii xooggu marka la gaaro maalinta kacaanka-- 21-Oktoobbar-- Xamar bay ku taallaa, waa dalcad yar oo uu ku yaallo isbitaalka xooggu, markii dalcadda laga soo degana waxaa hoos ku yaal "Salaan saarka" oo ah halkii uu Fariinsan jiray ama salaanta lagu siin jiray madaxwaynihii iyo hoggaamiyihii kacaanka AUN Maxamed Siyaad Barre, maadaamma goobtu tahay meel ku calaamaysan kacaankii ayaan sheekada ugu magac daray " Buur-kacaan"
"Halkaa ka daa sheikh.! Sheeko Gaaban.
[Coronavirus:-] Soomaalida qurbaha oo dadkooda gaarsiiya sheekooyinka argagaxa leh
[Daawo:-] Waraysi Xiiso Badan Oo Lala Yeeshay Jilaaga Caanka Ah Ee Jawaan [ Maxaa Loogu Bixiyay Magaca ......]
[Daawo Live:-] Qosolkii Adduunka , Sooraan Iyo Jawaan Oo Daawaha Ka Soo Qaaday Cudurka Coronavirus Sheeko Ku Saabsan
Waraysi Xiiso Badan Oo Lala Yeeshay Suxufiga Ruug Cadaaga Ah Ee Axmed Siciid Cige & Buug Uu Qoray Oo Wax Waraystay [